November 2016 – Radio KeyFM
Weeraro cusub oo ka dhacay gobolka Rift Valley
29th November 2016	Somali Language 0
Ilaa labo qof ayaa loo malaynayaa in ay ku dhinteen weerar ka dhacay deegaanka Kiriamet ee Kerio Valley. Labo kamid ah dadkii ka bad baaday weerarka oo lagu dabiibayo cisbitaalka Kabernet ayaa u sheegay warbaahinta in ilaa Afar nin ay soo weerareen iyaga oo xoolo daaqsanaya goobta weerarku ka dhacay. …
Uhuru oo Weydiistay Odinga in uu ka fariisto Siyaasada
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa shalay oo Isniin ahayd weydiistay hogaamiyaha Cord Raila Odinga in uu ka fariisto siyaasada ,una daayo dhalinyarada in ay siyaasada u tartamaan. Uhuru ayaa ku eedeeyay Odinga in uu adeegsanayo hadalo been abuur ah si u sumcad xumeeyo dowlada Jubilee. “ Waxaa laga yaabaa in ay …
Gubernatooraha Wajir oo ku baaqay in aan la siyaasadayn la dagaalanka musuq maasuqa
Gubernatooraha Wajir Ahmed Abdullaahi ayaa u sheegay dowlada in ay joojiso kusoo weecitaanka arimaha musuq maasuqa dowladaha kowntiyada. Mr Abdullaahi ayaa kasoo horjeesaday sheegashada dowlada ee ah in dhaqaalaha ku baxa safarada Raila Odinga ay bixiyaan dowladaha kowntiyada ee ay xisbigiisu ka taliyaan. “ Waxaan u sheegayaa hogaamiyaha aqlabiyada baarlamanka …
Xukuumada jubilii oo ku eedeysay Raila Oding musuqmaasuqa
25th November 2016	Somali Language 0
Xukumada jubilii ayaa ku eedeyay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ODM Raila Odinga inuu difaacayo arrimo la xirriiro musuqmaasuq ay galeen gafanarada xisbigisa taabacsan. siyaasiin uu kacaay hogaamiyaha aqlabiyada aqalka barlaamaka ahna xildhibaanka laga soo doorta magaalada Garisa Barre Aadan Ducaale ayaa sheegay in Raila Odinga uu ku hadalo ereyo iska hor …
Madaxweyne uhuru Kenyatta oo amray in militiga kdta ay furan wada ay xireen oo kuyaala xaafada kayole ee magaalada Nairobi.
Madaxwayn Uhuru Kenyatta ayaa soo kala dhex galay muran dhaxeeyay mudda bil ah ciidaanka militiriga KDf-Ta iyo dadka degaanka xaafadda kayole iyo Mihango oo kuyaalla magaalada tan Nairobi oo kusaabsan khilaaf dhanka dhulka ah. Militiriga ayaa xiray wada wayn oo isaga kala gudbo xaafada Kayole iyo Mihaango iyagoo sheegay in …
Haweenka gobolka waqooyi bari oo loogu baaqay inay door wayn u yeeshaan siyaasada gobolka
Haweenka ka soo jeeda gobolka wagooyi bari ayaa waxaa loogu baaqay inay qayb wayn ka qaatan xilalka kala duwan iyo kuraasta siyaasadeed ee dowlad degaanadooda iyo kuwa dowladda dhexeba. Wakiilka Haweenka kawntiga Garisa Shukran Gure ayaa ku tilmaantay nasiib darro in haweenka gobolka waqooyi bari asyan taageero wayn ka helin …
Dowladda oo sheegtay inay aqoonsigii kala laabatay dugsi kuyaalla magaalada Nairobi
Dowlada ayaa sheegtay in dugsi hoose dhexe ee kuyaala magaalada Nairobi ay kala laabatay aqoonsigii kadib markii la sheegay in maamulka dugsigaasi uu u hogaan sami waayay sharciga lagu mamnuucay in loo dhiga ardayday casharada dheeriga ah ee loo yaqaano tuushoonka xilliyada lagu jira mudda fasaxa ah. Wasaarada waxbarashada ayaa …
Kenya iyo Itoobiya oo wado qorsha lagu xoojinayo amaanka degaanada dhaca xadka way wadaagaan
Dalalka kenya iyo Itoobiya ayaa sheegay in ay wadaan dadaal ku aadan qorsha cusub oo la doonayo in lagu xoojiya amanaka degaanada dhaca xadka u dhaxeeya labada dal. Mas’uuliinta u qaabilsan dhanka labada dal kenya iyo Itoobiya ayaa sidoo kale sheegay in qorshahaasi uu sidoo kale lagu doonayo in lagu …
Beeralayda dalka oo loogu baaqay inaysan la daahin abuuritaan beerahood
Beeralayda dalka ayaa looga baaqay inay la deg degaan oo ay waqti horey abuurtaan beerahooda islamarkaasna ay isticmaalaana miraha leh u adkeysiga oonka kulka madaama oo laga cabsi qabo in xilli roobeedkani uusan roobka u di’in la filayay meela badan dalka Khubarada dhanka saadaasha hawada ayaa sheegay in laga cabi …
Mulkiilayaasha hodheelada Marsabit oo samaynayo gudi ay ku midaysanyihiin
Mulkiilayaasha hodheelada kuyaalla kawntiga Marsabit ayaa sheegay inay wadaan qorsha ay kudoonayaan aasaasida gudi ay kumidaysan yihiin dhammaan mulkalayaasha iyo dadka maalgashiga ku sameysta ganacsiga hodheelada. Wasiirka wasaarada ganacsiga , Hidda iyo dhaqanka kawntigaasi marsibit Golicha Sora ayaa sheegay in dowlad degaankaasiisa uu si wayn u soo dhawaynayo guddiga ay …